Nkwenye Ogo - Saky Steel Co., Ltd.
Ogo bụ akụkụ dị mkpa nke SAKY STEEL Business Principles. Thekpụrụ dị mma na-eduzi anyị iji nyefee ngwaahịa na ọrụ gafere atụmanya ndị ahịa ma zute ụkpụrụ niile. Kpụrụ ndị a enyerela anyị aka inweta mmata dị ka ndị na-ere ahịa tụkwasịrị obi site n'aka ndị ahịa gburugburu ụwa. SAKY STEEL Ndị ahịa tụkwasịrị obi wee họrọ ya n'akụkụ ụwa niile. Ntụkwasị obi a dabere na onyonyo anyị dị mma na aha ọma anyị maka ịna-ewepụta ngwaahịa dị elu.
Anyị nwere ụkpụrụ iwu dị oke mkpa chọrọ iji kwado nnabata site na nyocha na nyocha onwe onye na nyocha nke atọ (BV ma ọ bụ SGS). Thesekpụrụ ndị a na-egosi na anyị na-arụpụta ma na-ebupụta ngwaahịa dị oke mma ma kwekọọ na ụlọ ọrụ dị mkpa na usoro iwu na mba ndị anyị na-arụ ọrụ.
Dabere na ngwa ahụ ezubere na ọnọdụ nnyefe teknụzụ ma ọ bụ nkọwa ndị ahịa, enwere ike ịme ọtụtụ nyocha dị iche iche iji hụ na edobere ụkpụrụ kacha mma. Ejirila ọrụ ndị a nwere nnwale a tụkwasịrị obi na akụrụngwa maka ule na-ebibi ma na-enweghị mbibi.
A na-eme ule niile site na ndị ọrụ mmụta a zụrụ azụ na-agbaso ụkpụrụ nduzi nke Ogo Nlekọta. Akwụkwọ ederede 'Akwụkwọ mmadoro mma' na-egosipụta omume gbasara ụkpụrụ nduzi ndị a.
Jikwaa ụdịdị dị iche iche
Nọdụ spectral ngwá
CS Chemical Composition Test
Isi ike HB Ule
O siri ike HRC Ule
Eddy-Ugbu A Testing
Nnyocha nke Ultrosonic
Intergranular Corrosion Ule
Ekwentị: 0086-21 51026334
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 8 awa.